बाँकेमा कसरी कोरोना फैलियो ? पढ्नुहोस् ‘फिल्ड’मा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको अनुभव - Arthapage
बाँकेमा कसरी कोरोना फैलियो ? पढ्नुहोस् ‘फिल्ड’मा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको अनुभव
प्रकाशित मितिः २५ श्रावण २०७७, आईतवार १९:५४ August 9, 2020
बाँकेमा हाल कोरोना संक्रमीतको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यसको संक्रमणको दोस दिने र नियन्त्रणका लागि जस लिने सवैले आफ्नै तर्फबाट काम देखाउन विभिन्न सामाजिक संजाल फेसबुक, टुइटर, इन्ट्राग्राम देखि पत्रपत्रिकामा आफ्ना कामको फोटो तथा समाचार प्रत्येक दिन प्रकाशन गरि रहेका छन् ।कोही आफ्नो बौद्धिकता देखिउनहालको महामारी र मेडिकल सामाग्रीको कमीको बेलामा यो र त्यो गर्नु पर्यो भन्दै छन् ।क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा न्युनतम आवश्यकताका सामाग्री, औषधी र सुरक्षाका सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन कठिन रहेको देखिन्छ ।आमजनता बाट व्यक्तिगत सहयोग भइरहेको छ भने, विभिन्न संघ संस्थाबाट पनि उतिकै सहयोग भइरहेको छ ।
नेपालगन्जमा कोरोना पहिलो चरणमा हुदाँ बाटोघाटोमा विभिन्न थरीका सेनिटाइजर छर्नेहरु अहिले हराएका छन् । भारतबाट नेपालीहरु आउने क्रम बढेको, समुदायमा कोरोना फैलिरहेको अवस्थामा भने स्थानिय निकायलाई कोरोना पोजेटिभ भएकाको घर तथा क्वारेन्टाइनमा सेनिटाइज गर्न गाह्रो रहेको छ । हाल कोरोना समुदाय स्तरमा पुगिसकेको भएपनि नेपालगन्जको स्थिति हेर्ने हो भने यो शहरी क्षेत्र र विशेष गरि उच्च र मध्यम बर्गमा बढि देखिएको छ ।
यसको अर्थ पिसिआर परिक्षणको पहुचँ अझै आमजनता तथा टोल–टोलमा नपुगेको हुन सक्छ र दोस्रोमा यस लकडाउनको बखत र त्यस पश्चात पनि यथासक्य जानकारी हुदाँहुदै भएको लापर्वाही नै हो ।
केहि संक्रमितहरुको सामान्य कुराकानि यस प्रकार रहेको छ ।
-माक्स त लागएकै थियौ, सेवाग्राहीहरु गेटमा रोक्छ भनेर माक्स लगाउछन्, कामगर्ने बेलामा माक्स कि हातमा कि च्युडोमा राख्छन्, धेरै सेवाग्राही आउने ठाँउ हो, को बाट सर्यो थाहै भएन ।
-असार मसान्तपछि हाम्रो नजिकका साथिहरु संग सानो भेटघाट थियो, सामान्य खानपिनभयो त्यसको ३–४ दिन पछि हल्काज्वरो र सुख्खा खोकि लाग्यो जाँचगर्दा पोजेटिभ देखियो, अब मेरा परिवारको जाचँछिटो गरिदिनु पर्यो ।
– आफन्तले घरको कार्यक्रममा बोलाएका थिए, खानाको व्यवस्था थियो, म लगाएत त्यस घरका २–३ जना पोजेटिभ देखियो ।
– मलाई पोजेटिभ देखियो, पृतिकार्य थियो, केही आफन्तिले प्रसाद ग्रहण गरेकाथिए।
– जान त कतै गएको होइन, केटाकेटि छिमेकीको वर्थडेमा गएका थिए, एक पटक साथिहरु बाट बधाईको टिका ग्रहण गरेको थिए ।
– हाम्रो साथिहरुको सानो गु्रप छ सधै चियामा भेटघाट हुन्थ्यो, अब सवैको जाँचगर्नु पर्यो,।
– छिमेकी जिल्लामा पुगेर आए पछि, २–४ दिन टाइम पासका लागि तास, लुडो खेल्ने गरिन्यो, त्यतै बाट हो की सरेको,
– दिउसोको काम गरेपछि खाजा बाहिर खाने गरिएको थियो, त्यतै बाट सरेको जस्तो लाग्छ ।
– अरु त कतै होइन, मिटिङ्गहरुमा जाने र खाजाखाने कामहुन्थ्यो, त्यतै बाट सरे होला ।
– इण्डियाबाट आएका थियौं, क्वारेन्टाइनमा बसेका थियौं ।
– डिउटिमा खटिएको हो, कहिले कहिले घर जाने गरिएको थियो, सानी छोरीको पोजेटिभ आयो ।
यी र यस्ता संक्रमीतहरुका केहीभनाइले अब सवै सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । सबैले आफु र समाजलाई सुरक्षित राख्नकालागि मेरा साथिहरु, मेरो आफन्त, आजको मात्रकार्यक्रम, मलाई केहि हुदैन, भएको छैन भने जस्ता कुराहरु बाट सचेत रहन जरुरी छ ।
साथ साथै अबव्यवस्थित क्वारेनटाइन, अझ धैरै र सुरक्षित आइसोलेसन बेड बनाउन जरुरी छ । सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मी अझजिम्मेवार हुनआवश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाई कर्मीको मनोबल उच्च राख्नका लागि सम्पुर्ण कार्यलय प्रमुख तथा राजनितिकर्मीले विशेष भुमिका खेल्न जरुरी रहेको छ ।
कोरोनाको यो युद्धमा सम्पुर्ण स्थानीयतह, स्वास्थ्यकार्यालय, सुरक्षाकर्मी, राजनितिकर्मी, एक जुट हुन जरुरी छ ।अबको यो विषम् समयमा निजि तर्फका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि खटाउन जरुरी रहेको छ ।
सन्चार माध्यमहरुले पनि सम्वेदनशिलअवस्थामाहतारमा भन्दापनि सहि समाचार सहित जनतालाई सु–सुचितगर्ने खालका सन्देशहरु प्रकाशनगर्न आवश्यक रहेको छ । समुदाय स्तरमाकोरोनाको परिक्षण गर्न तयारी र योजना बनाउन जरुरी रहेको छ ।
वली/रिमाल हाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्यशाखामा कार्यरत छन् ।
प्रकाशित मितिः २५ श्रावण २०७७, आईतवार १९:५४ |
Prevबाँकेमा कोरोनाका कारण ७० वर्षिया महिलाको निधन
Nextक्वारेन्टाइन नबसी स्वाब परीक्षण गराउने, रिर्पोट पोजेटिभ आएपछि बेपत्ता